ပုံဆွဲစကေး 1: 1 1.5234567 8910
option ကို 1
option ကို 2
option ကို 3
option ကို4option ကို 5
option ကို 6
option ကို 7
option ကို 8
width ကို X
အဆိုပါရေပြင်ညီတန်း G01234567 8910
ဒေါင်လိုက်ဘား V012345
အဆိုပါချိတ်ဆက်ချောင်းတွေ Z012345
formwork များအတွက်ပျဉ်ပြား၏အထူ T
ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ width E
ကွန်ကရစ် Meshkov 1 ကုဗမီတာ F
အင်္ဂတေ : သဲ : နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက်
အင်္ဂတေ (အိတ်နှုန်း) M
သဲ (1 တန်များအတွက်) P
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက် (1 တန်များအတွက်) B
ပျဉ်ပြား (1 ကုဗမီတာများအတွက်) W
Fitting များ (1 တန်များအတွက်) N
လိုအပ်သောမျက်နှာစာများ Specify မီလီမီတာရှိ
X - ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ width
Y - အခြေခံအုတ်မြစ်အရှည်
A - အခြေခံအုတ်မြစ်၏အထူ
H - ဖောင်ဒေးရှင်းအမြင့်
C - တံတားဝင်ရိုးမှအကွာအဝေး
S - ဒြပ်ပေါင်းများအကြားခြေလှမ်း
G - အဆိုပါရေပြင်ညီတန်း
V - ဒေါင်လိုက်ဘား
Z - အဆိုပါချိတ်ဆက်ချောင်းတွေ
ဒါဟာဘိလပ်မြေ၏အမှတ်တံဆိပ်, ရလဒ်ကွန်ကရစ်, အရွယ်အစားနှင့် Filler ၏အချိုးအစား၏လိုချင်သောတန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အိတ် Specify ။
တစ်ဦး monolithic အခြေခံအုတ်မြစ်၏ကုန်ကျစရိတ်အိမ်၏တန်ဖိုးကို၏တတိယမှကြွလာလို့ပါပဲ။
ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုအိမျတျောကိုအခြေခံအုတ်မြစ်များ၏အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်တွက်ချက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ device ကိုချွတ်အခြေခံအုတ်မြစ်ဘို့ပျဉ်ပြားပိတ်ထား, အင်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၏ပမာဏကိုတွက်ချက်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
ခြေရင်းအခြေခံအုတ်မြစ်၏ဧရိယာ (ဥပမာအားဖြင့်, အချောမြေအောက်ခန်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရေစိုခံတာပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန်)
အဆိုပါအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်ကြမ်းပြင်ပြားများအတွက်ကွန်ကရစ်ပမာဏတစ်ခုသို့မဟုတ်မြေအောက်ခန်းကြမ်းပြင်လောင်း (မြှောက်အတွက်မူလတန်းအမှားအယွင်းများကြောင့်လုံလောက်တဲ့ကွန်ကရစ်မဟုတ်ပါဘူးအခါ, အကြောင်း, ပျော်စရာဖြစ်သွားမယ့်)
အင်အားဖြည့် - အဆို့ရှင်များ၏အရေအတွက်၎င်း၏အလေးချိန်၏အလိုအလျှောက်တွက်ချက်, အလျားနှင့်အချင်းအပေါ်အခြေခံ
အားလုံးမျက်နှာပြင်၏ဧရိယာ (မြေအောက်ခန်းရေစိုခံ၏တွက်ချက်မှုအဘို့) နှင့်ဘက်မျက်နှာပြင်များနှင့်တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်း
အခြေခံအုတ်မြစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်၏တွက်ချက်မှု Added ။
ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်သူများကအကြံပြုအဖြစ်ဘိလပ်မြေအချိုးအစားနှင့်ပမာဏ, ကွန်ကရစ်အောင်ဘို့သဲနှင့်ကျောက်စရစ်, ကို default ရည်ညွှန်းပေးအပ်ကြသည်။
ထိုဘိလပ်မြေစျေးနှုန်း, သဲ, ကျောက်စရစ်အဖြစ်။
သို့သော်အချောကွန်ကရစ်၏ဖွဲ့စည်းမှုနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက်သို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်, ဘိလပ်မြေအမှတ်တံဆိပ်၎င်း၏လတ်ဆတ်နှင့်သိုလှောင်အခြေအနေများကို၏အရွယ်အစားအပိုင်းအစပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်ခြင်းဘိလပ်မြေစဉ်အတွင်း၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများရှုံးသိရနှင့်ဘိလပ်မြေအရည်အသွေးအမြင့်မားသောစိုထိုင်းဆမှာပိုပြီးလျှင်မြန်စွာဆိုးရွားသွားဖြစ်ပါတယ်။
သဲနှင့်ကျောက်စရစ်၏ကုန်ကျစရိတ် 1 တစ်တန်များအတွက်အစီအစဉ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောကြောင်းသတိပြုပါ။ စျေးသည်များလည်းကြေမွသောကျောက်သို့မဟုတ်ကျောက်စရစ်, သဲကုဗမီတာလျှင်စျေးနှုန်းကြေညာခဲ့သည်။
သဲ၏အချိုးအစားက၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြစ်သဲတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထက် သာ. လေး၏။
1500 ကီလိုဂရမ် - သဲ 1 ကုဗမီတာပျမ်းမျှ 1200-1700 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီး။
ကျောက်စရစ်နှင့်အကျိုးအပဲ့ခက်ခဲအတူ။ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. 1200 ကနေ 2500 မှကီလိုဂရမ်၏အမျိုးမျိုးသောသတင်းရပ်ကွက် 1 ကုဗမီတာအလေးချိန်အရသိရသည်။ လေးလံ - ဒဏ်ငွေထက်ပို။
သို့သော်တွက်ချက်မှုဆဲမြေအောက်ခန်းဖြည့်ဘို့ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ်ကိုသိရန်ကူညီပေးသည်။ ဇာထိုး fittings နောက်ထပ်ဝါယာကြိုး, အမှုအဘို့အလက်သည်းသို့မဟုတ် screw နှစ်ခု, အဆောက်အဦးပစ္စည်းပို့ဆောင်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။